Bilayska Kenya oo baadi-goob ugu jira qof looga shakisanyahay in uu ka dambeeyay qarixii Nairobi - Sabahionline.com
Bilayska Kenya ayaa sheegay Talaadadii (29-ka May) in ay raadiyaan nin looga shakiyay in uu aasay walxaha qarxa kaasoo burburiyay dukaamo ku yaalla bartamaha Nairobi Isniintii, isagoo dhaawacay 38 qof.
Saddex qof oo loo xiray baaritaanka qaraxii Eastleigh
“Waxannu wadnaa baaritaankii, laakiin illaa iyo hadda wali waxba ma aynaan qaban,” sidaana waxa AFP u sheegay Taliye ku-xigeeka bilayska Nairobi Moses Nyakwama.
“Waxannu ku raad-joognaa qof galay dukaan dabadeedna dhigay boorso, waanna halkaa meesha bamku ka qarxay,” ayuu yiri. “Waxaannu haynaa tilmaantii qofkaa; saraakiishu waxa ay isku duwayaan macluumaadkii ay heleen taasoo ka gacan ka siin doonta in ay soo helaan isag iyo kuwii la shaqeeyay.”
Ra’iisul-wasaare Raila Odinga ayaa Isniintii qaraxa ku tilmaamay weerar “argagixiso” isaga oo ugu baaqay dadka reer Kenya midnimo. “Meelihii kale oo dhan ayay ku soo fashilmeen, waanunna hubnaa in ay ku fashilmi doonaan dalkeenna,” ayuu yiri Odinga sida ay sheegtay idaacadda Capital FM-ta Kenya.
“Nolasha iyo hantida dadka Kenya waa qaali….waxana waajib ah in la ilaaliyo. Waannu cambaaraynaynaa argagixisannimada, waxannuna u sheegaynaa in uu waqtigoodii soo dhammaaday. Dadka Kenya waa ay guulaysan doonaan; Argagixisaduna ma guulaysan doonto,” ayuu Odinga hadalkiisa ku daray.
Waxa uu ciidamada ammaanka Kenya ugu baaqay “in ay dadaal dheeri ah la yimaadaan si ay ula dagaallamaan argagixisada.”